गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरी (दायाँ) एमालेका उम्मेदवार टिकाराम खड्का (बायाँ)
२०७९ जेठ ८ आइतबार १०:३८:००
दाङकाे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ । ३५ हजार एक सय ७५ मत गन्दा एमालेबाट मेयर पदका उम्मेदवार टीकाराम खड्का आठ सय ११ मतले अघि छन् । उनले १५ हजार चार सय पाँच मत ल्याएका छन्, भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरीले १४ हजार पाँच सय ९४ मत ल्याएका छन् ।
उपमेयरमा पनि एमालेको अग्रता छ । एमालेको तर्फबाट उपमेयरका उम्मेदवार स्यानी चौधरीले १४ हजार ६ सय १५ मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा छन् । गठबन्धनको तर्फका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर रानाले १० हजार आठ सय ९२ मत ल्याएका छन् ।
अहिलेसम्म नाैवटा वडाको मतगणना सकिएको छ । ती मध्ये चारवटा वडामा एमाले, तीनवटा वडामा कांग्रेस र दुईवटा वडामा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको छ।
आइतबार बिहान सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार वडा नं. ७ मा कांग्रेसका रामबहादुर जिसी दुई हजार चार सय पाँच मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका डिल्लीराज भण्डारीले एक हजार सात सय ९२ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, वडा नं. ९ मा कांग्रेसका घनश्याम ढकाल एक हजार नाै मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका वामदेव न्यैपानेले नाै सय ८६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
तुलसीपुरमा यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले विजयी बनेको थियो । तुलसीपुरमा एक लाख एक हजार चार सय ६० मतदाता रहेकोमा ७४ हजार तीन सय ३६ जनाले मतदान गरेका थिए ।
तुलसीपुरमा ऋणको प्रभाव, विगतका वर्षभन्दा कम बजेट
तुलसीपुर खानेपानीको सम्बेल तोडफोड, खानेपानी सेवा अवरुद्ध
तुलसीपुर उपमहानगरले करारका कर्मचारी हटाएपछि विरोध
तुलसीपुर उपमहानगरले छाड्यो ‘स्मार्ट सिटी’को नारा
तुलसीपुरमा गठबन्धनद्वारा कार्यपालिका बैठक बहिष्कार